musha FOOTBALL MANAGER Andre Villas-Boas Childhood Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola anonyanya kuzivikanwa neNickname; "AVB". Our Andre Villas-Boas Childhood Nhoroondo pamwe nes Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake hwepamusoro asi vashomanana vanofunga kuti Andre Villas-Boas Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas akaberekwa musi we 17th waOctober 1977 in Porto, Portugal. Villas-Boas aiva mwana wechipiri uye mwanakomana wekutanga kuna amai vake Teresa Maria nababa, Luís Filipe Manuel.
Villas-Boas vakataura zvinyanzwisiso Chirungu kubva pauduku vachionga mbuya vake vanobva kuStockport, England. Pazera remakore 16, Villas-Boas akazviwana ari kugara munzvimbo imwechete yeimba iyo Sir Bobby Robson, uyo akanga ari maneja wePorto. Vakava vavakidzani vane ushamwari vachitevera gakava rebhora pakati pezviviri. Iyi yakanga iri nguva Villas-Boas akawana mutungamiri wake.
Robson aida huchenjeri hwake zvokuti akagutsikana kumupa basa kuPolto yekuona dhipatimendi. Achitevera kufambira mberi kwake, akazomukurudzira kuti atore chikwata chake che FA chekuita. Villas-Boas ndiye aiva muduku uye akachenjera zvikuru pachikoro chake chekudzidzisa. Akatora C yeiri rekodzero pazera re 17, uye B yake yelayisensi pa18. Zvinotyisa, akagamuchira reA licheneri panguva ye19 uye akazowana UEFA Pro License pasi pemudzidzisi weJim Fleeting. Izvi zvakagadziriswa zvakawanikwa zvinoreva kuti Villas-Boas akanga akagadzirira kudzidzisa rimwe boka kunyange zvazvo achiri muduku.
Villas-Boas aiva nekambani shoma semuongorori wemhizha weBrithani Virgin Islands nhamba yevanhu vose panguva ye21, asati atamira kune rimwe basa semubatsiri wepurazi muPorto pasi José Mourinho. sezvo Mourinho vakatumira makirabhu kuCentral neIntnazionale, Villas-Boas vakatevera.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Kune mudzimai mumwe chete muhupenyu hwake. Haasi mumwe munhu kunze kweJoana Maria.
Muna 2004, Villas-Boas vakaroora Joana Maria Noronha de Ornelas Teixeira, aneye iye zvino vane vanasikana vaviri, Benedita (akaberekwa August 2009), Carolina (akaberekwa muna October 2010) uye mwanakomana, Frederico (akazvarwa muna May 2015). Pasi apa Villas-Boas nevanasikana vake vanodada.
Pasi apa Andre Villas-Boas nemwanakomana wake, Frederico Villas-Boas.
Pasi pana Joana Maria nevanasikana vake vaviri vanodikamwa.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Andre Villas-Boas ane zvirevo zvinotevera kumunhu hwake.
Andre Villas-Boas Strengths: Villas-Boas inobatanidza, hurumende, inyasha, mafungiro uye hutsika mune zvisikwa.
Andre Villas-Boas Matambudziko: Anogona kunge asingakanganisi. Anoda kutakura gurusi.
Chii Andre Andres-Boas Anofarira: Ane chimiro cheHarmony, unyoro uye kugovana zvinhu nevamwe.
Chii Andre Andres-Boas asingadi: Haafariri chisimba, kusurukirwa, kusaruramisira, inzwi rakarema uye kufanana.
Mukupfupisa, Andre Villas-Boas ane unhu hune rugare uye hwakanaka. Kunyangwe iwe iwe anogona kuchengeta gakava sezvinoonekwa muukama hwake nevatambi, ndiye mumwe munhu uyo ​​achazoti anosuruvara. Andre Villas-Boas akagadzirira kuita chero chinhu chipi nechipi kuti arege kurwisana uye kuchengeta rugare chero nguva zvichibvira.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Andre-Villas Boas akauya kubva mumupfumi neumambo hwemhuri pamberi pebhokisi risati rabhadhara kwaari. Akanga ari wechipiri uye mwanakomana wekutanga weLuís Filipe Manuel Henrique do Vale Peixoto de Sousa e Villas-Boas (akaberekerwa 29 February 1952) uye Teresa Maria de Pina Cabral e Silva (akaberekwa 11 February 1951).
Anotaura Chirungu zvakanaka, achidzidziswa naambuya vababa vake Margaret Kendall, avo amai vakatamira kuPortugal kubva kuCeadle, Greater Manchester, England, kutanga bhizinesi rewaini. Hanzvadzi yake Douglas Kendall akashanda semutungamiri wemapapiro kune RAF panguva yeHondo Yenyika Yechipiri.
Villas-Boas ndiyewo muzukuru waM Dom José Gerardo Coelho Vieira Pinto do Vale Peixoto de Vilas-Boas, 1st Viscount yaGuilhomil. Kunyanya zvakadaro, sekurukuru vababa vake José Rui Villas-Boas vaiva Viscount yaGuilhomil, zita rekutanga rakapiwa baba vake José Gerado Villas-Boas naMambo Carlos I mu1890.
Pakupedzisira, munun'una waVals-Boas 'João Luís de Pina Cabral Villas-Boas ndiye chikwata chePortugal uye muterevhizheni. Pasi apa firimu yake yakafanana.
João Luís ane chikamu chiduku mumutambo wokupfeka Mistérios de Lisboa (Mysteries of Lisbon).
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Zvakaita Chelsea Fans Akamutumidza Zita
Vechidiki veCleancia FC vakambodana Andre Villas-Boas DVD nokuti nguva dzose pavakamuona akanga achifamba-famba nemurwi weDVD pasi pemaoko ake uye achiita kuti vaone.
Tarisa mavhidhiyo eDVD haana kubatsira vatambi. iyo yakakonzera 45% kukunda chiyero. Izvi zvakaita kuti kusafarira zvachose kweAVB.
Sezvo fan fan Chelsea inotaura, ...
"Vatambi (Lampard naTerry zvikuru) havana kutenda maari uye maDVD maitiro ake. Havana kutenga mukutarisa DVD kuti vadzidze bhora.
Nokudaro, Andre Villas-Boas ainzi ainzi AVB kuenda kuDVD kubvira apo akatadza kutenda nevatambi vake veCentral.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Premier League Record uye Beyond
Nguva yeCals-Boas paCentral yakatanga kuparadzana mushure mokunge vatambi vakawanda vepakutanga vakaratidza kuvhiringidzwa kwavo mukudzidzisa kwake. Akasunungura pamabasa ake seChristian manager munguva pfupi yapfuura. VaPutukezi kubvira panguva iyoyo vakave nechitsiko kuTottenham kwaakakundikana kufadza. Akabva atamira kuRussia kunodzidzisa Zenit St. Petersburg paakazova mambo waaizviziva.
Andre Villas-Boas Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Nhaka yaMambo
PaZenit St. Petersburg, akakunda trophies matatu kusanganisira sangano. Pasinei nokuzivikanwa kwake kutora mararamiro ake mushure mekunge ari muLondon, Villas-Boas akava uye akagara mambo kune vanhu vake muRussia sezvinoratidzwa pasi apa.
Villas-Boas inowanzotaridzirwa nokuda kwekunyatsoongorora kwevadzivisi vake. Nzira yake yebhola yakatevedzana nechisimba chakasimba.
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga vedu Andre Villas-Boas Childhood Story pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.